ESI EGBOCHIE SAỊTỊ NA CHROME - GOOGLE CHROME - 2019
Esi egbochie saịtị na Google Chrome nchọgharị
Enwere ike igbochi saịtị na ihe nchọgharị Google Chrome. Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ igbochi ohere nwatakịrị ga-enweta na ndepụta ụfọdụ nke ngwa weebụ. Taa, anyị ga-elebakwu anya na esi arụ ọrụ a.
O di nwute, ọ gaghị ekwe omume igbochi saịtị ahụ iji ngwaọrụ Google Chrome. Otú ọ dị, n'iji mgbatị pụrụ iche, ịnwere ike ịgbakwunye ọrụ a na ihe nchọgharị ahụ.
Esi egbochie saịtị na Google Chrome?
Ebe ọ bụ Anyị agaghị enwe ike igbochi saịtị ahụ site na iji ngwaọrụ Google Chrome. Anyị na-agbanye aka enyemaka nke ntanetị nchọgharị Block Site.
Olee otú iji wụnye Block Site?
Ịnwere ike ịwụnye ndọtị a ozugbo na njikọ dị na njedebe nke isiokwu ahụ, ma chọta ya n'onwe gị.
Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ihe nchọgharị na windo na-egosi, gaa na "Ngwaọrụ ndị ọzọ" - "Nkwụsị".
Na windo na-egosi, gbadaa na njedebe nke ibe ma pịa bọtịnụ ahụ. "Ihua ndị ọzọ".
Ihuenyo ahụ ga-ebu ụlọ ahịa Google Chrome, na mpaghara aka ekpe nke ị ga - eji tinye aha nke ndọtị chọrọ - Block Site.
Mgbe ị pịa bọtịnụ Tinye, a na-egosipụta nsonaazụ ọchụchọ na ihuenyo. Na ngọngọ "Ọpụpụ" Oghere Block Site anyị na-achọ bụ dị. Mepee ya.
Ihuenyo na-egosiputa ozi zuru ezu banyere mgbatị ahụ. Iji tinye ya na ihe nchọgharị, pịa bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri nke ibe. "Wụnye".
Mgbe oge ole na ole gasịrị, a ga-etinye mgbatị ahụ na Google Chrome, dịka akara ngosi ndọtị ga-apụta, nke ga-apụta na mpaghara aka nri nke ihe nchọgharị weebụ.
Kedu otu esi arụ ọrụ na Mgbasa Block Site?
1. Pịa otu ugboro na akara ngosi ndọtị ma họrọ ihe na menu nke gosipụtara. "Nhọrọ".
2. Ihuenyo ahụ ga-egosipụta akara nchịkọta ndọtị, na nchịkọta aka ekpe nke ị ga-achọ imepe taabụ ahụ. "Ebe ndị a kpochiri". N'ebe a, ozugbo na mpaghara elu nke ibe, ị ga-akpali ịbanye peeji nke URL, wee pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye ibe"igbochi saịtị.
Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-egosi adreesị nke Odnoklassniki n'ụlọ obibi iji chọpụta ọrụ nke mgbatị ahụ n'ọrụ.
3. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mgbe ị gbakwunyere saịtị, ịnwere ike ịhazi peeji nke redirection, i.e. nyefee saịtị nke ga-emeghe kama nke a na-egbochi.
4. Ugbu a chọpụta ihe ịga nke ọma nke ọrụ ahụ. Iji mee nke a, banye na ntanetị akwụkwọ anyị gbochiri saịtị ahụ ma pịa bọtịnụ Tinye. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihuenyo ahụ ga-egosipụta windo na-esonụ:
Dịka ị pụrụ ịhụ, igbochi saịtị na Google Chrome dị mfe. Nke a abughi ntinye nyocha nke bara uru, nke na-agbakwụnye atụmatụ ọhụrụ na ihe nchọgharị gị.
Download Block Site maka Google Chrome maka n'efu